Chelsea Oo Bayer Leverkusen Kala Heshiisay Lacagta Kai Havertz & Qodobka Kaliya Ee Hadhsan – Laacibnet.net
Chelsea Oo Bayer Leverkusen Kala Heshiisay Lacagta Kai Havertz & Qodobka Kaliya Ee Hadhsan
Kooxaha Chelsea iyo Bayer Leverkusen ayaa heshiis ka gaadhay xiddiga da’da yar ee Kai Havertz, kaas oo ay Blues kusii dhowaanayso dhamaystirka qandaraaska ay ku keenayso Stamford Bridge.
Tababare Frank Lampard ayaa si weyn uga shaqaynaya, dabadana ka riixaya waaxaha iibka sidii Havertz heshiiskiisa loo dhamaystiri lahaa maalmaha soo socda, si uu u yimaaddo kooxda ka hor inta aanay bilaabin isku diyaarinta xili ciyaareedka cusub.
Chelsea marna may qarsanin sida ay u doonayso laacibkan, waxaana warar usbuucii hore suuqa lasoo geliyey ay tibaaxeenin Blues ay heshiis shaqsi ah la gaadhay Havertz, isla markaana uu laacibkani ku wargeliyey inuu doonayo inuu ku biiro kooxda reer London.
Laakiin arrinta kaliya ee hadhsanayd ee ay ahayd in Chelsea ay ka shaqayso ay tahay qancinta Bayer Leverkusen oo u aragta Havertz hanti qaali ah oo gacanta ay ku hayso, isla markaana ay 90 milyan oo Gini ku xidhay kooxaha doonaya.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa maanta tabisay in Chelsea ay ugu dambayntii ku guuleysatay inay Bayer Leverkusen la gaadho heshiis buuxa, ayna isla qaateen qiimaha laacibkan iyo sida lacagta loo kala bixinayaba.
Chelsea ayaa la rumaysan yahay inay ku qancisay Leverkusen in dhawr jeer ay lacagta kala bixiso maadaama dhaqaalaha kooxaha uu jug weyn soo gaadhsiiyey fayraska Korona, lacagta badan ee ay kooxda reer Germany ku xidhay iibka Havertz na ay adag tahay in hal mar la wada bixiyo.
Labada kooxood ayaa isla qaatay qodobkan, waxaase hadhsan arrimo yaryar oo ay ka mid tahay in Chelsea ay u shubto Leverkusen wajiga hore ee lacagta uu heshiiskoodu jidaynayo, isla markaana qandaraaskii shanta sannadood ahaa ee la wariyey inay Blues la gaadhay laacibkan, si rasmi ah loo soo bandhigo.
Warku waxa uu intaa ku daray in Chelsea ay si rasmi ah usoo bandhigi doonto laacibkan oo xidhan garankeeda marka uu dhamaado tartanka Europa League oo ay Bayer Leverkusen wareeggiisa siddeedda lug kula jirto, iyadoo hal ciyaar ka badisay Rangers oo kulan iskugu hadhsan yahay.